လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များ ဖမ်းဆီးအရေးယူရာတွင် ပရဟိတနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းများမှ ယာဉ်များ ပါ/မပါ....
ယခုအခါတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များဖမ်းဆီးမည်ဆိုသည့်အကြောင်းကို သတင်းစားများ ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းများနှင့် အများပြည်သူကြားမှကြားသိနေရပါသည်
ထိုသို့လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များဖမ်းဆီးရာတွင် အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေသော ပရဟိတအသင်းများ နာရေးကူညီမှုအသင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအသုံးပြုသည့်ယာဉ်များ စသည်တို့ကိုပါအရေးယူပါမည်လားခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြု၍အလင်းပြပေးပါခင်ဗျာ.
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များအားအရေးယူမည့်အကြောင်းကို သတင်းစာ ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများမှာဖော်ပြအသိပေးခဲ့သလို လက်ရှိလဲအရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီလို လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များအရေးယူမည်လို့အသိပေးတဲ့နေရာမှာ ပရဟိတအသင်းများ နာရေးကူညီမှုအသင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအသုံးပြုသည့်ယာဉ်များမပါရှိပါလို့သီးခြားဖော်ပြထားတာမဟုတ်ဘဲ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်လို့ပဲဖော်ပြပါရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ယာဉ်အားလုံးကိုဆိုလိုတာပါခင်ဗျာ.
ပရဟိတအသင်းများ နာရေးကူညီမှုအသင်းများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးများအသုံးပြုသည့်ယာဉ်များကို လိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးဖို့ ရှိ/မရှိ သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာသိထားတာလေးရှိရင် မျှဝေပေးပါခင်ဗျာ.
လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့ပိုင်လူနာတင်ယာဉ်များ ပရဟိတအသင်းယာဉ်များဟာ ဥပဒေနှင့်အညီ စုံစမ်း၍မရသည့်ကိစ္စရပ်များကိုကျူးလွန်နိုင်ခြင်း ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သတ်၍ အရေးမယူနိုင်ခြင်း လူနာပြုစုကုသခြင်းဆိုင်ရာပြသနာများ ပေါ်ပေါက်နိုင်ခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်များရှိနေ၍ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်မရှိသည့် လူနာတင်ယာဉ်များကိုစီစစ်ပြီးကျန်မာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်သော လူနာတင်ယာဉ်စစ်ဆေးချက် တည်ဆဲဥပဒေများကိုချိုးဖေါက်သောယာဉ်မဖြစ်ခြင်း စသည့်အချက်များနှင့်ပြည့်စုံပါက အချိန်ကာလအပိုင်းအခြားသတ်မှတ်ပီး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စီစစ်ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လျှပ်စစ် စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က 15.12.2017 ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်တွင်ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း သတင်းစာမှတဆင့်ဖတ်ရှုသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ.။
( မေးထားသူတစ်ဦး၏မေးခွန်းအားအခြားသူများပါသိစေလို၍ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မှာဆင်းရဲသားတောင်သူမိဘများမှမွေးဖွားခဲ့သည့်ပြည်သူတစ်ဦးသာဖြစ်သည့်အတွက်အခုရော နောင်ရော ကျွန်တော်ဥာဏ်မမှီသည့် မတွေးခေါ်နိုင်သည့် မေးခွန်းနှင့်ဆွေးနွေးမှုအချို့တို့ကို မိမိမစွမ်းသာသဖြင့်ပြန်လည်မဖြေကြားနိုင်သည်ကို နားလည်ပေးပါခင်ဗျာ)
Nay Myo Thu Ya ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှ ကူးယူတင်ပြပေပါသည်။
ယခုအခါတှငျ တဈနိုငျငံလုံး လိုငျစငျမဲ့ယာဉျမြားဖမျးဆီးမညျဆိုသညျ့အကွောငျးကို သတငျးစားမြား ဂြာနယျ မဂ်ဂဇငျးမြားနှငျ့ အမြားပွညျသူကွားမှကွားသိနရေပါသညျ
ထိုသို့လိုငျစငျမဲ့ယာဉျမြားဖမျးဆီးရာတှငျ အမြားအကြိုးကိုဆောငျရှကျနသေော ပရဟိတအသငျးမြား နာရေးကူညီမှုအသငျးမြားနှငျ့ ဘုနျးတျောကွီးမြားအသုံးပွုသညျ့ယာဉျမြား စသညျတို့ကိုပါအရေးယူပါမညျလားခငျဗြာ ကြေးဇူးပွု၍အလငျးပွပေးပါခငျဗြာ.
လိုငျစငျမဲ့ယာဉျမြားအားအရေးယူမညျ့အကွောငျးကို သတငျးစာ ဂြာနယျနှငျ့ မဂ်ဂဇငျးမြားမှာဖျောပွအသိပေးခဲ့သလို လကျရှိလဲအရေးယူဆောငျရှကျလြှကျရှိပါတယျ အဲ့ဒီလို လိုငျစငျမဲ့ယာဉျမြားအရေးယူမညျလို့အသိပေးတဲ့နရောမှာ ပရဟိတအသငျးမြား နာရေးကူညီမှုအသငျးမြားနှငျ့ ဘုနျးတျောကွီးမြားအသုံးပွုသညျ့ယာဉျမြားမပါရှိပါလို့သီးခွားဖျောပွထားတာမဟုတျဘဲ လိုငျစငျမဲ့ယာဉျလို့ပဲဖျောပွပါရှိတာဖွဈတဲ့အတှကျ တရားဝငျမှတျပုံတငျထားခွငျးမရှိတဲ့ ယာဉျအားလုံးကိုဆိုလိုတာပါခငျဗြာ.
ပရဟိတအသငျးမြား နာရေးကူညီမှုအသငျးမြားနှငျ့ ဘုနျးတျောကွီးမြားအသုံးပွုသညျ့ယာဉျမြားကို လိုငျစငျပွုလုပျပေးဖို့ ရှိ/မရှိ သိခငျြပါတယျခငျဗြာဆရာသိထားတာလေးရှိရငျ မြှဝပေေးပါခငျဗြာ.
လူမှုကူညီရေးအသငျးအဖှဲ့ပိုငျလူနာတငျယာဉျမြား ပရဟိတအသငျးယာဉျမြားဟာ ဥပဒနှေငျ့အညီ စုံစမျး၍မရသညျ့ကိစ်စရပျမြားကိုကြူးလှနျနိုငျခွငျး ယာဉျစညျးကမျး လမျးစညျးကမျးခြိုးဖောကျမှုနှငျ့ပတျသတျ၍ အရေးမယူနိုငျခွငျး လူနာပွုစုကုသခွငျးဆိုငျရာပွသနာမြား ပျေါပေါကျနိုငျခွငျးစသညျ့ လိုအပျခကျြမြားရှိနေ၍ ယာဉျမှတျပုံတငျမရှိသညျ့ လူနာတငျယာဉျမြားကိုစီစဈပွီးကနျြမာရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးဝနျကွီးဌာနကသတျမှတျသော လူနာတငျယာဉျစဈဆေးခကျြ တညျဆဲဥပဒမြေားကိုခြိုးဖေါကျသောယာဉျမဖွဈခွငျး စသညျ့အခကျြမြားနှငျ့ပွညျ့စုံပါက အခြိနျကာလအပိုငျးအခွားသတျမှတျပီး ယာဉျမှတျပုံတငျစီစဈပွုလုပျပေးမညျဟု ရနျကုနျတိုငျး လြှပျစဈ စကျမှုလကျမှုနှငျ့လမျးပနျးဆကျသှယျရေးဝနျကွီး ဒျေါနီလာကြျောက 15.12.2017 ရကျနကေ့ ရနျကုနျတိုငျးလှတျတျောတှငျပွောကွားခဲ့တဲ့အကွောငျး သတငျးစာမှတဆငျ့ဖတျရှုသိရှိရပါတယျခငျဗြာ.။
( မေးထားသူတဈဦး၏မေးခှနျးအားအခွားသူမြားပါသိစလေို၍ဖျောပွခွငျးဖွဈပါသညျကြှနျတျောမှာဆငျးရဲသားတောငျသူမိဘမြားမှမှေးဖှားခဲ့သညျ့ပွညျသူတဈဦးသာဖွဈသညျ့အတှကျအခုရော နောငျရော ကြှနျတျောဉာဏျမမှီသညျ့ မတှေးချေါနိုငျသညျ့ မေးခှနျးနှငျ့ဆှေးနှေးမှုအခြို့တို့ကို မိမိမစှမျးသာသဖွငျ့ပွနျလညျမဖွကွေားနိုငျသညျကို နားလညျပေးပါခငျဗြာ)
Nay Myo Thu Ya ဖဘေု့တျအကောငျ့မှ ကူးယူတငျပွပပေါသညျ။